Yangu iPhone Haizotumira Mifananidzo! Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa. - Iphone
zvinorevei 47 zvinoreva pamweya
handigadzirise wachi yangu yeapuro
maitiro ekuchaira zvakavanzika kubva parunhare
uno gonesa sei yakaremara ipad?
maitiro ekuchinja yako memoji pane iphone
Yangu iPhone Haizotumire Mifananidzo! Heino Chaicho Kugadzirisa.
Uri kuyedza kutumira mifananidzo kubva ku iPhone yako, asi havazopfuure. Izvo hazvina basa kuti urikushandisa mameseji, Mapikicha, kana imwe app - hapana chinoshanda. Pane kudaro, yako iPhone inoti Kwete Kununurwa neye tsvuku yekudanidzira poindi mukati medenderedzwa, kana ako mapikicha anonamira pakati pekutumira uye haatombopedza. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei yako iPhone isingatumire mifananidzo uye maitiro ekuongorora uye kugadzirisa dambudziko zvachose.
Izvo Zvaunoda Kuziva Tisati Tatanga
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuti tione kuti nei yako iPhone isingatumire mifananidzo kupindura iyi mibvunzo miviri, uye ini ndichakubatsira iwe nezvose.
Ndeapi Mifananidzo Asiri Kutumira Uchishandisa iMessage kana Yakajairwa Meseji Meseji?
Chero nguva yaunotumira kana kugashira mameseji kana meseji meseji pane yako iPhone, inopfuura seyese meseji meseji kana iMessage. MuMessage app, iyo iMessages iwe yaunotumira inoratidzira mumabhuruu matema uye iwo mameseji iwe aunotumira anoratidza kumusoro mune girini.
Kunyangwe ivo vachishanda pamwe chete mushe muapp Messages, iMessages uye mameseji anoshandisa matekinoroji akasiyana kutumira mifananidzo. iMessages inotumirwa uchishandisa Wi-Fi kana iyo isina waya data chirongwa chaunotenga kuburikidza neyako isina waya inotakura. Nguva dzose mameseji / mifananidzo meseji inotumirwa uchishandisa chirongwa chekutumira mameseji iwe chaunotenga kuburikidza newewe waya isina waya.
maitiro ekuti ubvise putty kubva mumagumbeze
Kana yako iPhone ikasatumira mifananidzo, dambudziko rinowanzo kuve nemeseji kana iMessages - kwete nezvose zviri zviviri. Mune mamwe mazwi, mifananidzo kuda tumira neMessages, asi hautumire nemeseji / mifananidzo meseji - kana zvinopesana. Kunyangwe iwe ita tine dambudziko nezvose zviri zviviri, isu tinofanirwa kugadzirisa dambudziko rega rega zvakasiyana.
Kuti uone kana yako iPhone iri kunetseka kutumira mameseji neMessages kana mameseji mameseji, vhura iyo Messages app uye vhura hurukuro nemumwe munhu wausingakwanise kutumira mifananidzo kwaari. Kana mamwe mameseji awakatumira munhu iyeye ari eblue, yako iPhone haizotumire mifananidzo uchishandisa iMessage. Kana mamwe mameseji ari munyoro, yako iPhone haizotumire mifananidzo uchishandisa yako mameseji chirongwa.
Mifananidzo Haisi Kutumira Kune Mumwe Munhu, Kana Kuti Wese?
Iye zvino zvaunoziva kana dambudziko riine iMessages kana mameseji / meseji meseji, inguva yekuona kana iwe uine dambudziko kutumira mapikicha kune wese munhu kana kune munhu mumwe chete. Kuti uite izvi, edza kutumira pikicha kune mumwe munhu seyedzo, asi verenga izvi kutanga:
Usati watumira bvunzo pikicha, ita shuwa kuti unozvitumira kune mumwe munhu ari kushandisa tekinoroji imwechete (iMessage kana mameseji / meseji yemifananidzo) semunhu wausingakwanise kutumira mifananidzo kwaari. Hezvino zvandiri kureva:
Kana mifananidzo ikasatumira kushandisa kune mumwe munhu uchishandisa iMessage, tumira bvunzo pikicha kune mumwe munhu anoshandisa iMessage (bhuruu matema). Kana iwe mifananidzo ikasatumira uchishandisa yako yemavara / mifananidzo meseji chirongwa, tumira bvunzo pikicha kune mumwe munhu ane mameseji anoenda kuburikidza seye mameseji (mune girini matema).
Semutemo wechigumwe, kana pikicha ikasatumira kune munhu mumwe chete, dambudziko ravepo zvavo end uye ivo vangangoda kuchinja chimwe chinhu pa iPhone yavo kana neyavo isina waya inotakura kugadzirisa dambudziko. Kana iwe iPhone usingatumire mifananidzo kune chero munhu , dambudziko ravepo yako magumo. Ini ndichakupa mhinduro kune ese ari maviri mamiriro pazasi.
Kana Yako iPhone Isingatumi Mifananidzo Uchishandisa iMessage
1. Edza Yako Internet Kubatana
iMessages dzinotumirwa pamusoro pe iPhone yako kubatana kune internet, saka chinhu chekutanga chatichaita kuyedza yako iPhone kubatana kune internet. Nzira iri nyore yekuita izvi kuedza kutumira meseji uchishandisa yako isina waya data chirongwa uye woedza kutumira meseji kana yako iPhone yakabatana neWi-Fi.
Kana yako iPhone yakabatana neWi-Fi uye yako iPhone isingatumire mifananidzo, enda ku Zvirongwa -> Wi-Fi uye kudzima Wi-Fi. Yako iPhone inozobatana necellular data network, uye iwe unofanirwa kuona 5G, LTE, 4G, kana 3G inoonekwa mukona yekumusoro-kuruboshwe kona yekona.
Edza kutumira mufananidzo zvakare. Kana ikapfuura, dambudziko riripo nekubatana kwako kweWi-Fi, uye ini ndanyora chinyorwa chinotsanangura zvekuita kana yako iPhone isinga batane neWi-Fi . Usakanganwa kudzorera Wi-Fi zvakare kana wapedza!
Kana yako iPhone ikasatumira mifananidzo kana isina kubatana neWi-Fi, enda kune imwe nzvimbo ine Wi-Fi, batanidza kune netiweki yeWi-Fi mukati Zvirongwa -> Wi-Fi , uye edza kutumira meseji zvakare. Kana iyo meseji ikapfuura, dambudziko racho rinogona kunge riine yako iPhone's cellular data kubatana.
2. Ita shuwa kuti Cellular Dhata Yashandurwa
Enda ku Zvirongwa -> Cellular uye ita shuwa switch iri padhuze ne Cellular Dhata yakavhurwa. Paunenge usina kubatana neWi-Fi, iMessages inotumirwa uchishandisa yako isina waya data chirongwa, kwete yako mameseji chirongwa. Kana Cellular Dhata ikadzimwa, iyo mifananidzo yaunotumira seyese mameseji / mifananidzo meseji inopfuura, asi iyo mifananidzo yaunotumira seMessages haigone.
3. Iye Mumwe Munhu Ane iMessage Yakavhurwa?
Ini nguva pfupi yadarika ndakashanda neshamwari ine mameseji anga asiri kuenda kumwanakomana wavo mushure mekunge awana foni itsva, isiri Apple. Icho chinetso chakajairika chinoitika kana mumwe munhu achinjira kune yeApple smartphone asi asingasayine kubuda kweMessage.
Heino mamiriro acho: Yako iPhone uye iMessage server inofunga kuti munhu iyeye achine iPhone, saka vanoedza kutumira mifananidzo vachishandisa iMessage, asi havatombopfuura. Neraki, pane nzira yakapusa yekuti vasayine kubuda kweMessage uye kugadzirisa dambudziko zvachose. Vaudze kuti vatevere iyi link kuenda Peji rekutsigira reApple kwavanogona kudzima iMessage nekuzvitumira ivo meseji uye kunyora mukodhi yekusimbisa online.
4. Dzorerazve Network Zvirongwa
Shanduko isinga zivikanwe mu Zvirongwa zveapp inogona kukonzera matambudziko ekubatanidza ayo anogona kuve anonetsa kuongorora, asi pane nzira yakanaka yekuzvigadzirisa zvese kamwechete. Dzorerazve Network Zvirongwa ndiyo nzira huru yekumisikidza chete marongero aya anokanganisa nzira iyo iPhone yako inosangana neWi-Fi uye nharembozha, pasina kukanganisa chero ruzivo rwemunhu. Iwe unofanirwa kubatanidzazve kunetiweki yako yeWi-Fi zvakare, saka ita shuwa kuti unoziva password usati waenderera mberi.
Kuti ugadzirise zvakare maratidziro enetiweki pane yako iPhone, enda ku Zvirongwa -> General -> Seta -> Gadziridza Network Zvirongwa , nyora pasipoti yako, uye tora Dzorerazve Network Zvirongwa . Edza kutumira imwe bvunzo meseji mushure mekunge yako iPhone reboots kuti uone kana dambudziko rakagadziriswa.
shiri dzinomirirei mubhaibheri
Kana iwe uchine matambudziko mushure mekutevera matanho aya, ramba uchienda kuchikamu chinonzi Kana Yako IPhone Isiri Kutumira Mifananidzo .
Kana Yako iPhone Isingatumire Mifananidzo Uchishandisa Yako Meseji / Mufananidzo Kutumira Meseji Chirongwa
1. Ita Kuti Chokwadi MMS Kutumira Meseji Kwashandurwa
Tatove takurukura nezvemhando mbiri dzemeseji dzinotumirwa uchishandisa Messages app: iMessages uye zvinyorwa / mifananidzo mifanikiso. Uye, kuita kuti zvinhu zviwedzere kuomarara, kune zvakare maviri marudzi ezvinyorwa / zvemifananidzo meseji. SMS ndiyo fomu yepakutanga yekutumira mameseji iyo inongotumira mashoma mashoma ezvinyorwa, uye MMS, iyo yakagadziriswa gare gare, inokwanisa kutumira mifananidzo uye marefu meseji.
Kana MMS ikadzimwa pane yako iPhone, yakajairwa mameseji (SMS) icharamba ichidarika, asi mifananidzo haigone. Kuti uone kuti MMS yakavhurwa, enda ku Zvirongwa -> Meseji uye ita shuwa switch iri padhuze ne MMS Kutumira yakavhurwa.
2. Tarisa uone A Inoendesa Zvirongwa Zvirongwa
Apple uye yako isina waya inotakura inowanzo pusha zvinogadzirisa zvekutakura kubatsira kuvandudza yako iPhone kubatana kune yako yekutakura network. IPhone yako inogona kusangana nenyaya dzemaseru kana marongero eanotakura asiri echimanjemanje.
Pop-up inowanzo kuoneka pachiratidziro panogadziriswa marongero anotakura. Kana iwe ukaona iyo pop-up pane yako iPhone, tinya Kwidziridza .
Iwe unogona nemaoko kutarisa kweanotakura marongero ekuvandudza nekuvhura Zvirongwa nekutepa General -> About . Pop-up ichaonekwa pano mumasekondi gumi kana gadziriso yekutakura iripo. Kana pop-up ikasaoneka, enda padanho rinotevera!
4. Bata Wako Anotakura Mutakuri
Nehurombo, kana zvasvika kumatambudziko nekubatana kwe iPhone yako kune yako isina waya inotakura, ungangoda kuonana navo kuti ubatsirwe. Nyaya dzevatengi zvevatengi uye zvekubuda kwehunyanzvi zvinogona kukonzera MMS mameseji kuti arege kuendeswa, uye nzira chete yekuziva zvechokwadi ndeyekufona nekubvunza.
Nzira yakapusa yekutsvaga kuti ndeyipi nhamba yekufona kutsvaga Google ' yako isina waya inotakura (Verizon, AT & T, nezvimwewo) nhamba isina tsigiro yevatengi ” Semuenzaniso, kana iwe Google 'Verizon wireless mutengi inotsigira nhamba', iwe unowana iyo nhamba iri pamusoro pemhedzisiro yekutsvaga.
Kana Yako iPhone Zvakadaro Usatume Mifananidzo
Kana iwe usati uchikwanisa kutumira mifananidzo ne iPhone yako, rairo yangu yekuti ungaenderera sei inoenderana nekuti haugone kutumira mifananidzo kune munhu mumwe chete kana iwe haugone kuitumira kune chero munhu.
Kana iwe usingakwanise kutumira mifananidzo kune munhu mumwe chete, vabvunze kana vachigona kugamuchira iMessages kana mameseji / mifananidzo mifanikiso kubva kune chero munhu. Rangarira, ivo vanogona kukwanisa kugamuchira iMessages asi kwete mameseji / meseji meseji, kana zvinopesana. Bheji rako rakanakisa nderokugovana navo chinyorwa ichi uye nekuvaita kuti vapfuure nematanho ekugadzirisa matambudziko ivo pachavo.
Kana iwe uchifunga kuti dambudziko rava kumagumo ako, hezvino zvaunofanira kuita zvinotevera: Delete hurukuro yako navo muMessage app, bvisa yavo kuonana kubva ku iPhone yako, uye uteedzere mirairo iri pamusoro kuti Reset Network Zvirongwa. Mushure mokunge iPhone yako yatanga zvekare, nyora nhamba yavo yefoni muImessage app uye edza kuvatumira iwo mufananidzo meseji. Kana ikapfuura, wedzera yavo yekuonana ruzivo zvakare uye iwe wakanaka kuenda.
Kana izvozvo zvakadaro haishande, ungangoda kutsigira yako iPhone kuICloud kana iTunes, dzosera yako iPhone, uyezve wozodzoreredza data rako kubva backup. Kudzorera yako iPhone kunodzima zvese zviri pairi uye kurodha zvakare software, maitiro anogona kugadzirisa ese marudzi esoftware nyaya. Ini ndinokurudzira iwe kuti uite DFU kudzoreredza, inova yakasarudzika mhando yekudzoreredza iyo Apple techs inoshandisa kuApple Chitoro. Ndanyora chinyorwa chinotsanangura sei DFU kudzorera iPhone wako .
Iye zvino kuti yako iPhone iri kutumira mifananidzo zvakare, enda kumberi uye utumire mimwe mifananidzo kune yako mhuri uye shamwari. Asi chenjera: Ndinoziva mumwe munhu akaedza kutumira pikicha yemuti wake weKisimusi mune yeboka mameseji kumhuri yake yese, asi netsaona akazopedzisira atumira zvimwe. Yakanga isinganetsi Kisimusi. Ndinoda kunzwa nezvezviitiko zvako uchifunga kuti sei usingakwanise kutumira mifananidzo pa iPhone yako muchikamu chemashoko pazasi, uye ndichave pano kuzobatsira munzira.
iphone skrini inoramba ichisviba